WAR CUSUB: Waxgaradka Jubbaland oo diiday dalab uga yimi Madaxtooyada Soomaaliya, muxuuse ku saabsanaa? – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Waxgaradka Jubbaland oo diiday dalab uga yimi Madaxtooyada Soomaaliya, muxuuse ku saabsanaa?
KISMAAYO(P-TIMES)- Wararka soo gaaraya Warsidaha Puntlandtimes.com kana helayo magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in ay waxgaradka Jubbaland si adag u diideen dalab uga yimi Madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho, kaas oo ku wajahnaa arrimaha ka jira deegaanadooda.
Siyaasiin aad ugu dhaw Madaxweynaha iyo Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa odayaasha dhaqanka ee Jubbaland, ee inta badan soo xulaya baarlamaanka cusub ka codsaday in ay martiqaad rasmi ah ku yimaadaan caasumada Soomaaliya.
Qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa sheegay in ay casumaadan ka heleen rag katirsan dawladda Soomaaliya oo lasoo marsiiyey, ayna ka codsadeen in ay Muqdisho u tagaan wada hadal la xariira arrimaha soo xulida baarlamaanka cusub ee Jubbaland.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu meesha uga saari lahaa Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, oo hadda isku diyaarinaya doorasho uu markale kusoo laabto.
Odayaasha dhaqanka ayaa qaarkood iska diiday casumaadda dawladda Soomaaliya, waxayna sheegeen in Jubbaland laga soo galo hanaan maamul, haddii wax la casumayana ay tahay in lasoo mariyo Xukuumadda ka jirta deegaanka.
Laakiin, qaar kamid ah odayaasha ayaa la sheegay in ay jeclaan lahaayeen ka qeybgalka kulamada Muqdisho oo ay xooga saarayaan, laakiin caqabadaha ugu waa weyn ee haysta ayaa ah in ay cabsi ka qabaan bixidooda iyo soo laabashadooda oo ay ka cabsanayaan xariga uga yimaada maamulka magaalada.
Damaca dawladda Soomaaliya ee kuwajahan Jubbaland, haddii uu hirgali waayo welwel weyn ayay arrintani ku tahay Madaxtooyada Faderaalka, waxaana ay dadaal badan ku bixinaysaa sidii meelmar looga dhigi lahaa qorshaha ku wajahan doorashooyin ay dawladdu saameyn ku leedahay oo ka dhaca Jubbaland iyo Galmudug.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa dhawaan ku hanjabay in haddii aan faragalinta la joojin, aysan cidna cid ka adkeyn oo ula jeeday in uu si buuxda ula dagaalami doono dawladda Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Jubbaland nabadda ay haysto ay waligeed haysan doonto, doorashaduna ku dhici doonto si xor iyo xalaal ah.